Is Social Media iri Sangano reSEO? | Martech Zone
Hazvishamise kuti nyanzvi dzekushambadzira dzikurukure nekugovana matekiniki ekushandisa kushambadzira midhiya enhau senge zano reSEO. Zviripachena, yakawanda yewebhu traffic iyo yaimbotanga neinjini dzekutsvaga ikozvino yafambiswa nekugovana kwevanhu, uye kune vashambadzi vazhinji, iyi hombe sosi yemotokari haigone kufuratirwa.
Asi iko kwekufungidzira kutambanudza kudhira pasocial media kushambadzira pasi peamburera yeSEO zano. Ichokwadi, pane zvinhu zvaunogona kuita uchiita pasocial media kushambadzira mushandirapamwe uyo uchave nehunhu hwakanaka paSEO (yakashambadzirwa maTweets, semuenzaniso) asi kushambadzira midhiya yenhau kuri pamusoro pezvakawanda zvakanyanya kupfuura kukwidziridza kuoneka mune dzekutsvaga injini mhedzisiro.
Kutaura chokwadi (uye kuridza mumiriri wangu wadhiyabhorosi) pane bhenefiti huru pakuisa zita rako munzvimbo dzakawanda dzemagariro uye kuongorora masosi sezvinobvira nekuti zvinokwanisika kuti kana mumwe munhu achitsvaga chigadzirwa kana sevhisi, mareferensi kune rako bhizinesi pane izvi nzvimbo dzakakwira traffic dzinogona kugogodza mukwikwidzi kubva papeji rekutanga. Kana zvikaitika, ndiko kukunda.
Asi kuhwina kana kwete, ndiwo mutambo usiri iwo. Paunobata vanhu nevekushambadzira vezvenhau, ivo vatove mune yako fanera. Icho chinangwa hachisi kuziva panguva ino. Kutsvaga ndeye refu-muswe kubatsirwa kwekutora chikamu, asi kwete chikonzero chekuzviita. Paunenge uchiita zvemagariro enhau, wave kutovaka ruvimbo, uchidzidza nezve izvo zvido zvevatengi vako, uye nekumisikidza kugadzira kukanda. Kana iwe uchitarisa pane iyo SEO mabhenefiti, iwe uri kutarisa isiri iyo bhora.
SEO uye yekushambadzira midhiya enhau zviri zviviri zvakakosha mabasa ekubudirira online uye vanoshanda mukonati, kunge muchato. Havana kubatana muchiuno. (mifananidzo yakanzi naLee Odden)
Chidiki Biz Yemagariro Media Yashanduka?
Matanho gumi Ekunyora Inoshanda Blog Post
May 17, 2011 pa 3: 32 PM
Zvese zvinoenderana nekuti unotsanangura sei SEO.
kana iwe uchireva kukwidziridza iwe saiti yeimwe kwds SM yaisazove yakanyanya kubatsira sekunge iwe uchireva kugadziridza huwandu hwewebhu zvivakwa zvakabatana nebhizinesi rako.
May 17, 2011 pa 5: 41 PM
Ini ndinofunga urikureva mutsauko uripakati-peji uye off-peji kiyi mutsara optimization. Chero zvazvingaitika, ichiri SEO uye kwete kushambadzira midhiya yenhau. Chero zviitiko zvekudyidzana zvinoitika pa-saiti uye zvine indexed zvinobatsira yako pa-saiti kukwidziridzwa, sekungofanana nechero chiitiko chehukama chinoitika kunze kwenzvimbo uye chakarongedzwa chinobatsira yako yekusaiti saiti. Iyo yakakosha poindi ndeyekuti uve wakajeka mune rako basa-urikutyaira kuziva, kana kuita funneling kubatanidzwa?
May 18, 2011 pa 4: 33 AM
Ndatenda, Lee. Mushumo weMarketer zvechokwadi unoratidza ruzivo rwangu sega semutengi wezvinhu zvakaoma. Ndine chokwadi chekuti mhedzisiro yacho yaizosiyana zvakanyanya kana tichitarisa kumisika senge maresitorendi, uko magariro / nharembozha iri kupa mipiro yakakosha kune simba revatengi.
May 19, 2011 pa 8: 15 AM
hongu midhiya enhau inzira ye seo… inopa kuwonekera zvakanyanya nekugovana zvinyorwa, zvakatumirwa pakati peshamwari..zvinobatsira kuwedzera traffic..kushandisa Nhau dzezvemagariro mukusimudzira link inobatsira uye iri kubuda nzira ..
May 19, 2011 pa 3: 41 PM
Alok, iwe uri kunyatso kuratidza yako poindi nekugadzira chinongedzo kune SEO bhizinesi kuburikidza nesocial comment. Izvi zvinokumbira iwo mubvunzo ... urikundipinza mukutaurirana, kana kungoshandisa pasocial media chikuva kuzivisa? Uye iyo yekumashure-link yakakosha kupfuura mukana wekuita hurukuro neni iyo inosimbisa hukama uye inovaka kuvimba? Kugovana back-link zvinokugadzika iwe semumwe munhu anongofarira kukosha kweSEO kwenzvimbo yemagariro?
Iwe unogona zvakare kuve uchienzanisira chirevo changu, kuti vezvenhau uye SEO zvinoda nzira dzakasiyana kuti dzibudirire. NeSEO, hit-and-run inozadzisa icho chinangwa. Kushandisa vezvenhau kushandurudza ini mutengi kunoda zvinopfuura chirevo uye chinongedzo. 🙂
May 19, 2011 pa 6: 28 PM
Sezvineiwo, ini ndaifanira kudzima zvakataurwa naAlok nekuti akaedza kukanda backlink yakagomara!
May 20, 2011 pa 2: 06 PM
Ndinofunga Alok akaita pfungwa yangu kwandiri, shure kwezvose. Kune mumwe munhu anotarisa pane SEO, zvemagariro enhau ingori imwe chikuva chekushandisa yavo yekubatanidza zano 🙂
Gumiguru 24, 2011 na1: 56 PM
kwandiri iri zano .. kuvaka nzanga yenzvimbo yekushambadzira kuri nyore kwebhizinesi rako. nekuti vanhu munharaunda yemagariro vanogona kuve sosi huru yevakapfeka.